Misy fepetra hajaina amin’ny lalàna manan-kery eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny fifaninanana eto, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra. Efa nohavaozina ilay lalàna voalohany tamin’ny taona 2005 ny taona 2018 teo. Mbola andrasana ny fampiharana azy saingy tsy misakana ny tompon’andraiki-panjakana rehetra io hatreto. Ny mpandraharaha sy mpanjifa ary fanjakana no toko 3 mahamasa-nahandro ny toekarena. Maro lafy ny fifaninanana tsy mazava na « concurrence déloyale » izay samy ataon’ireo mpandraharaha ka miantraika amin’ny samy izy ireo na amin’ny mpanjifa mihitsy. Azo aterina eny amin’ny filankevitry ny fifaninanana ny fitarainana mikasika ny fahitana ny tsy fanajana lalàn’ny fifaninanana. Voararan’ny lalàna koa ny fanaovana ampihimamba na « monopole » sy fanararaotana tanjaka ara-toekarena. Ny taona 2015 moa no nitsangana ny filankevitra ary ny taona 2016 no niasa. Tsy mbola manana tarehimarika mazava kosa hatreto mikasika ny fanadihadiana nataon’izy ireo ny filankevitra fa mbola hanadihady ireo orinasa ahiahiana, raha ny fanazavana hatrany.